Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လိုင်စင် - Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်
Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လိုင်စင်များ ဖြစ်နိုင်သည် 2020 အတွက်လာမယ့်ကြသည်! ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့် - ကင်တပ်ကီသည်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်တရားဝင်မှုကိုမဲပေးခွင့်ပြုခဲ့သည်။ Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဥပဒေသည်၎င်း၏ပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က ၆၅-၃၀ မဲဖြင့်မဲပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် Kentucky ၏လူများအတွက်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်မကြာမီဥပဒေဖြစ်လာပြီးလူနာများအားဥပဒေရေးရာဆေးခြောက်ဆေးဝါးနှင့်အခြားလူများအားတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောမလိုအပ်သောဖမ်းဆီးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
HB 136 အောက်တွင် Kentucky ၌လာမည့်ဆေးခြောက်ဆေးခွင့်လိုင်စင်အမျိုးအစားများအကြောင်းလေ့လာပါ။
သေချာမသိသေးပေမယ့်ကင်တပ်ကီအိမ်ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်တရားဝင်မှုဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုလိုက်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အမည်ကိုအခြားအရာများထဲတွင်ဆေးခြောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ကင်တပ်ကီဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဥပဒေများသည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာမကြာမီမှာပင်ကင်တပ်ကီသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူနာများအတွက်ဆေးခြောက်တရားဝင်နိုင်ငံများနှင့်ပူးပေါင်းလာနိုင်သည်။ မကြာခင်မှာပဲသင်ရနိုင်သည် Kentucky တွင်သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ရန်လိုင်စင်.
သင်၏ Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်လွှာအကြောင်းပြောပါ
ကီဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဥပဒေများ - ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကင်တပ်ကီပြည်နယ်အောက်လွှတ်တော်ကော်မတီသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်အားတရားဝင်ဖြစ်စေရန်ဥပဒေကြမ်းကိုတင်ခဲ့သည်။ HB 136, ပြည်နယ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောထောက်ခံမှုရှိပြီး, ဥပဒေဖြစ်လာဖို့ကောင်းတစ် ဦး အခွင့်အလမ်းရပ်တည်။ မကြာသေးမီကအောက်လွှတ်တော်ကော်မတီမှထုတ်ပြန်ခဲ့သောမူကွဲသည်ရပ်တည်နေသည် 116 စာမကျြနှာ, ။ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်၎င်းသည်စာမျက်နှာ ၆၀၀ ခန့်ရှိသော Illinois ဆေးခြောက်နှင့်စည်းမျဉ်းဥပဒေထက်များစွာတိုတောင်းသည်။
“ စိုက်ပျိုးသူ” ဆိုသည်မှာဤအခန်းအောက်ရှိလိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်းကိုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းသည်စက်ရုံကုန်ကြမ်းများကိုထွန်ယက်စိုက်ပျိုး၊ ရိတ်သိမ်းသည်၊ အခြားစိုက်ပျိုးသူ၊ ဆေးခန်း၊ ပရိုဆက်ဆာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊
“ ဆေးခန်း” ဆိုသည်မှာဤအခန်းအောက်ရှိလိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဆိုသည်၊ ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများထံမှဆေးခြောက် ၁၆ စီးကိုဝယ်ယူခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်း၊
“ ထုတ်လုပ်သူ” ဆိုသည်မှာဤအခန်းတွင်လိုင်စင်ရထားသောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်း၊ ခြယ်လှယ်ခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း (သို့) အခြားစက်ရုံကုန်ကြမ်းမှထုတ်ယူသောကုန်ကြမ်းများနှင့်စက်ရုံကုန်ကြမ်းမှထုတ်ယူသောထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးခြင်းအားဖြင့်စက်ရုံမှကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူသောအဖွဲ့အစည်းကိုဆိုလိုသည်။ လိုင်စင်ရဆေးခန်းမှရောင်းချရန်။ "
(ခ) ဤပြည်နယ်ရှိအခြားလိုင်စင်ရဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ ဆေးခြောက်ဆေးဝါးများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊
ဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကြိုးကိုင်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊
(၅) ဆေးခြောက်ဆေးဝါးများ မှလွဲ၍ အခြားဆေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုထုတ်ကုန်၊ ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပါအ ၀ င်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများကအသုံးပြုသောထုပ်ပိုးပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်ဆေးဝါးကုသမှုဆေးခြောက် မှလွဲ၍ အခြားအခန်းများ၊ ဤအခန်းအောက်ရှိလိုင်စင်ရကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများသို့မဟုတ်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊
(၆) ဤပြည်နယ်တွင်ထုတ်လုပ်သောဆေးခြောက်ဆေးခြောက်ကိုစမ်းသပ်ခြင်း၊ ဆေးခြောက်ပါဝင်မှု၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ မှိုများ၊ ညစ်ညမ်းခြင်း၊ ဗီတာမင်အီးအက်တိတ်နှင့်အခြားတားမြစ်ထားသောဆေးဝါးများအပါအ ၀ င်။
(၇) ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများနှင့်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များကိုသင်တန်းပေးခြင်း သင်တန်းတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်နိုင်သည် -
UNOFFICIAL COPY 20 RS HB 136 / GA စာမျက်နှာ ၁၁၈ HB2 - 118 - Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်တရားဝင်ခြင်း
၁၄ (၉)“ ဆေးရုံ” သည်ဤအခန်းအောက်ရှိလိုင်စင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်၊
၁၉ (၁၁)“ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း” ဆိုသည်မှာ -
၁၂ (၁၄)“ ကြီးထွားမှုareaရိယာ” သည်ပိတ်ထားသောသော့ခတ်ထားသောစက်ရုံနှင့်တူညီသည်။
၁၇“ ဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်” တွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကုန်ကြမ်းအပင် ၁၈ ခုပါ ၀ င်သည်။
UNOFFICIAL COPY 20 HB136 of RS HB4/ GA Page 118 of 013610.100 - Kentucky Medical Cannabis Legal
၂ (၁၉)“ အရွယ်မရောက်သေးသူ” ဆိုသည်မှာအသက် (၁၈) နှစ်မပြည့်သေးသူကိုဆိုသည်။
3 (20) "ဆေးဝါး" KRS 315.010 ၌ကဲ့သို့တူညီသောကိုဆိုလိုသည်;
ဤအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၊ 8 (5) "ပရိုဆက်ဆာ" ကိုဆိုလိုသည်ဤအခနျးအောက်မှာလိုင်စင်ရကုန်ကြမ်းစက်ရုံရရှိသွားတဲ့တစ်ခု entity ကိုဆိုလိုသည်
၁၃ ဆေးခန်း၊ ၁၄ (၂၃)“ Processor agent” ဆိုသည်မှာကျောင်းအုပ်ကြီးအရာရှိ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊ ၀ န်ထမ်းကိုဆိုသည်။
၂၁ (၂၆)“ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူနာ” ဆိုသည်မှာစာဖြင့်ရေးသားထားသောလက်မှတ်ရသူကိုဆိုသည်
20 HB136 -5- UNOFFICIAL COPY 118 RS HB 013610.100 / GA စာမျက်နှာ 366 - XXXX GA
4 ဆေးခြောက် SP ။ အပင်၊ ၅ (၂၉)“ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား” ဆိုသည်မှာဌာနမှထုတ်ပေးသောစာရွက်စာတမ်းကိုဆိုသည်
၁၆ (၃၂)“ လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေးဂျင့်” ဆိုသည်မှာကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကိုဆိုသည်။
၁၈ (၃၃)“ ပျိုးပင်” ဆိုသည်မှာပန်းများမရှိဘဲရှစ်တောင်ထက်ကြီးသောဆေးခြောက်ပင်ကိုဆိုလိုသည်
21 စက်ရုံပစ္စည်းတစ်ခုလျှံအားဖြင့်လောင်ကျွမ်းသောအခါ, ၂၂ (၃၅)“ ပြည်နယ်လိုင်စင်အဖွဲ့” သည်အောက်ပါတို့မှတစ်ခုခုကိုဆိုသည် -
20 HB136 -6- UNOFFICIAL COPY 118 RS HB 013610.100 / GA စာမျက်နှာ 366 - XXXX GA
၁၁ (၃၈)“ ရေးသားထားသောလက်မှတ်” ဆိုသည်မှာလက်တွေ့လေ့ကျင့်သူမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာရွက်စာတမ်းကိုဆိုသည်။
12 ကြောင်း: 13 (က) လူနာ၏လက်တွေ့အမြင်တွင်လူနာလက်ခံနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်